Orinasa misokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony any Shina | Feng Erda
Model / Size:0.2-2.5mm
Ny tifitra vy tsy misy fangarony dia vita amin'ny tariby vy SUS200, 300, 400 ary lasa tany misy baolina samihafa. Ny tifitra vy tsy misy volo dia misy fanoherana hafanana tsara, fanoherana ny harafesina, faritra manjelatra. Mety hisy vokany tsara amin'ny asa vita amin'ny vy tsy misy fangarony, fandefasana loko sy vokatra miloko izay mila kalitao ambonimbony. ny habeny manomboka amin'ny 0.20mm ka hatramin'ny 2.50mm.
Toerana tsy misy harafesina mamirapiratra, endrika boribory boribory
manta ara-nofo :
Ny tranga ara-toekarena amin'ny fampiasana tifitra tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny asa fanadiovana sy fanadiovana fipoahana dia mora atao. Ny tapaka tariby dia tsy vaky na simba mandritra ny fampiasana azy satria sombina mafy io. Vokatr'izany dia mahazo ireto tombony ireto ianao:
①Ny tombo-kase notapahina vy dia tsy manana tombony maharitra ela kokoa noho ny vy voatifitra na grit ary tifitra vy notapahina
②Midina ambany kokoa ny taranaka vovoka - madio kokoa ny asa fanapoahana volo
③Ny tombo-kase vy notapahina vy dia mamokatra vokatra tena tsara noho ny fitoviana sy ny tanjany
④Hanao anao fikambanana "Maitso" izy io satria hihena be ny fanary ny haino aman-jery efa lany. (Tsy mila fitifirana firy ianao, ho ambany ny takiana amin'ny lisitra, ary ho kely ny vidin'ny entana.)
⑤Tsy hampiditra fandotoana ferrous amin'ireo fanariana tsy ferrous na zavatra miasa ianao raha mampiasa ny vy na vy voatifitra tariby
300 andian-tsarimihetsika vy notifirina vy dia tena mandaitra amin'ny fitsaboana amin'ny tany ny fanariana aluminium, ary koa ny milina famaritana, indrindra ny «turbocharger».
200 sy 400 andian-dahatsoratra vy notifirina ho an'ny fanomanana aliminioma amin'ny fanesorana ny loko sy amin'ny famonoana maty aluminium ho an'ny fandosirana sy famaranana.
Previous: Zinc shot / Zinc notapahana tariby
Manaraka: Barium-Silicon (BaSi)
Voatifitra notifirina vy vy
Fitifirana vy tsy voatanisa
Grit ambany zoro karbonika ambany